Ụlọ ọrụ nke Akwụkwọ Nsọ - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Ụlọ Ọrụ Akwụkwọ Nsọ
Iwu nke ụlọ ọrụ kọwara
Ihe kpatara ya na ihe kpatara ya
Chineke na -arụ ọrụ site n'aka ndị nnọchianya
A kpọrọ ndị nnọchi anya Chineke “Chukwu”
Ndị ozi Chineke na -ekwu okwu, a na -agwakwa ha okwu dị ka a ga -asị na ha onwe ha bụ Chukwu
Echiche nke mmụọ ozi Jehova (Malach nke YHWH)
Ndị nnọchi anya Chineke, gụnyere mmụọ ozi nke Jehova, abụghị Chineke n'ụzọ nkịtị
Jizọs bụ onye nnọchiteanya nke Chineke
Jizọs na Chineke na -akpakọrịta, a na -akpọkwa ya Chineke dabere n'echiche nke inye mmadụ ikike
Jizọs abụghị Chineke n'echiche nkịtị nke onlogical
Ọ bụ Jehova (YHWH), onye naanị ya bụ Chineke, bụ onye mere ka ohu ya bilie
Nchikota, Jisos bu onyeozi na onye isi nchu aja nke nkwuputa ayi
RA Johnson, Otu na Ọtụtụ n'ime Echiche nke Israel nke Chineke
N'echiche pụrụ iche mgbe nna ochie dịka onye nwe ezinụlọ ya mere ka ohu ya tụkwasịrị obi dochie ya egwu (onye ozi ya ma ọ bụ mmụọ ozi ya) nyere nwoke ahụ ikike na akụrụngwa nke onyenwe ya ka ọ nọchite anya ya n'ụzọ zuru oke ma zụọ ahịa n'aha ya. N'echiche ndị Juu, a tụpụtara onye nnọchi anya onye ozi a dị ka onye n'onwe ya-yana n'okwu ya-ọnụnọ nke onye zitere ya. ”
“Mmalite & Akụkọ mmalite nke Ọgbakọ Ndị -ozi,” T. Korteweg, n’ime Afọ Ndị Ozi na Echiche Ndị Patrist, ed. Hilhorst, p6f.
Mmalite nke ụlọ ọrụ ndị ozi bụ… dịka ọmụmaatụ na Mishnah Berakhot 5.5: 'onye ọrụ mmadụ dị ka onwe ya.' ntọala ọ bụghị naanị aha ndị Juu nke shaliach, kamakwa nke Ndị Kraịst si n'ezi ofufe dapụ dịka anyị na -ahụ ya na NT… echiche Semitic na nke ndị Juu nke ikike nnọchite anya nke pụtara na nhọpụta nke shaliach.
Ndi Hibru 3: 1-2, Jisos onye ozishaliach) na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị
Na1 Ya mere, ụmụnna nsọ, unu ndị na -ekere oke ọkpụkpọ eluigwe, tụgharịa uche Jizọs, onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị, 2 onye kwesịrị ntụkwasị obi nye onye họpụtara ya, dika Moses kwesiri ntukwasi -obi n'ulo Chineke nile.
A ihe kpatara ya bụ ihe omume kacha nso, ma ọ bụ ozugbo kpatara, ụfọdụ nsonaazụ a hụrụ. Nke a dị iche na ọkwa dị elu ihe kpatara ya nke a na -echekarị na ọ bụ “ezigbo” ihe mere ihe ji mee. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)
Ka anyị were ihe atụ nke 2 Samuel 3:18 n'okpuru. Jehova (onye isi) bu mbụ/kacha ihe kpatara nzọpụta ebe Devid bụ sekọndrị/nso n'ihi na dị ka ọ na -ekwu, "Site n'aka ohu m Devid, aga m azọpụta ndị m Izrel." Ma Chineke ma Devid bụ ndị nzọpụta n'ihe gbasara Israel. Ugbu a Chineke wetaara Izrel onye nzọpụta, Jizọs dịka o kwere na nkwa (Ọrụ 13:23).
Ọrụ Ndị Ozi 13: 22-23 (NIV), Chineke wetaara Izrel onye nzọpụta, Jizọs dịka o kwere na nkwa
22 Ma mb hee o wepusiri ya, ọ welie Devid ibu eze -ha, onye ọ b testiara àmà bayere ya, si, Achọtawom nime Devid nwa Jesi nwoke dika obim si achọ, onye g dome ihe nile m'nāchọ. 23 Nke mkpụrụ nwoke a Chineke wetaara Izrel onye nzọpụta, Jizọs, dika o kwere na nkwa.
N'okpuru bụ ihe atụ nke etu Chineke si arụ ọrụ site n'aka ndị nnọchi anya ya. Moses na Eron we me dika Jehova nyere iwu. Erọn weliri mkpara ya tie mmiri ahụ. N'ime ya ka ọ na -eme ihe a, Jehova tiri mmiri Naịl ma mee ka ọ bụrụ ọbara. Erọn bụ ihe kpatara ya (onye nnọchi anya) na Jehova bụ ihe kpatara (omume) nke omume ahụ. N'Ọpụpụ 23, Jehova zigara otu akụkụ n'ihu Israel wee gwa ha ka ha gee ntị ma rube isi n'olu ya - "n'ihi na aha m dị n'ime ya." N'ebe a, Chineke na -eji onye nnọchi anya na -emezu ebumnuche ya ma nye onye ọrụ a ikike ịrụ ọrụ n'aha ya. Irube isi n'olu mmụọ ozi = ime ihe niile Chineke kwuru. Ma mgbe ọ na -ekwu na "Jekọb na Chineke gbara mgba" ọ na -agbasi mgba ike na mmụọ ozi Jehova. Ọzọkwa 2 Samuel 3:18, na -egosi na ma Jehova Chineke na Devid bụ ndị nzọpụta n'ihe gbasara Israel. Jizọs bụkwa ohu Chineke nke ọ kpọlitere (Ọrụ 3:26) Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta. Ọrụ na omume nke ndị nnọchi anya Chineke bụ ọrụ na omume nke Chineke.
Ọpụpụ 7: 17-20 (NIV), Erọn kụrụ mmiri = Jehova gburu mmiri ahụ
17 Otú a ka Jehova siri, Nime nka ka unu gāmara na Mu onwem bu Jehova: le, ọ bu nkpa -n'aka nke di n'akam ka m'g striketi miri nke di n'osimiri Nail, ọ we ghọ ọbara. 18 Azụ dị na Naịl ga -anwụ, Naịl ga -esi ísì, mmiri ị drinkingụ mmiri sitere na Naịl ga -agwụkwa ndị Ijipt. ”'” 19 Jehova we si Moses, Si Eron, Were nkpa -n'aka -gi, setipu aka -gi n'elu miri nile nke Ijipt, n'elu osimiri nile ha, na ọwa -miri -ha nile, na ọdọ -miri -ha nile, na ọdọ -miri -ha nile, ka ha we ghọ. ọbara, ọbara ga -adịkwa n’ala Ijipt dum, ọbụna n’ihe e ji osisi rụọ nakwa n’ihe ndị e ji nkume mee. ’” 20 Moses na Eron we me dika Jehova nyere iwu. N'anya Fero na n'anya ndị na -ejere ya ozi, o weliri mkpara ya tie mmiri n'ime osimiri Naịl, mmiri niile dị na Naịl wee ghọọ ọbara..
Ọpụpụ 23: 20-25 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Irube isi n'olu onye ozi m = ime ihe niile m (Jehova) kwuru
20 “Lee, M na -eziga mmụọ ozi n'ihu gị ichebe gị n'ụzọ na ịkpọbata gị ebe m kwadebere. 21 Lezienụ ya anya nke ọma ma rube isi n'ihe o kwuru; enupukwala isi megide ya, n'ihi na ọ gaghị agbaghara mmebi iwu gị, n'ihi na aham di nime ya. 22 “Ma ọ bụrụ na i gee ntị nke ọma n'olu ya wee mee ihe niile m kwuru, mgbe ahụ, m ga -abụ onye iro ndị iro gị na onye na -emegide ndị na -emegide gị. 23 “Mgbe mmụọ ozi m ga -ebutere gị ụzọ wee kpọga gị na ndị Amọraịt na ndị Het na ndị Perizaịt na ndị Kenean, ndị Haịvaịt na ndị Jebus, m wee kpochapụ ha, 24 i gaghi -akpọ isi ala nye chi -ha, efè -kwa -la ha òfùfè, emela dika ha si eme, kama i gākwatu ha, tipia kwa ogidi nile ha. 25 Unu g servefè Jehova, bú Chineke -unu, ọ ga -agọzikwa nri gị na mmiri gị, m ga -ewepụkwa ọrịa n'etiti gị.
“Aha m dị n'ime ya” = ọ bụ onye nnọchi anya m ma ọ na -eji ikike m arụ ọrụ.
Hosia 12: 2-4 (IGBOB) Jekọb na mmụọ ozi lụrụ ọgụ = Jekọb lụsoro Chineke ọgụ
2 Jehova nwere ebubo megide Juda, Ọ ga -atakwa Jekọb ahụhụ dị ka ụzọ ya si dị; ọ ga -akwụ ya ụgwọ dị ka omume ya si dị. 3 N'ime afọ o jidere nwanne ya nwoke n'ikiri ụkwụ, na n'ịbụ dimkpa ya ọ lụsoro Chineke ọgụ. 4 Ya na mmụọ ozi ahụ lụrụ ọgụ wee merie; ọ kwara akwa ma chọọ ihu ọma ya.
Ọrụ 3:26 (ESV), “Chineke mere ka ohu ya bilie”
Ọlụ Ndị Ozi 5: 30-31 (ESV), Chineke nna anyị ha kpọlitere Jizọs-Chineke buliri ya elu ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta
30 Chineke nna nna anyị hà kpọlitere Jizọs n'ọnwụ, onye i gburu n'osisi n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka Onye ndu na onye nzọpụta, inye Izrel nchegharị na mgbaghara mmehie
Jizọs rụtụrụ aka kpọmkwem na Abụ Ọma 82: 6 mgbe ọ na -akọwa na ndị a na -akpọ okwu Chineke na -akpọ Chineke nakwa na ọ na -ekwu na ya bụ Ọkpara Chineke n'ịrụ ọrụ Nna ya. Na Abụ Ọma 45: 2-7 A kpọrọ Nwa nke mmadụ “Chineke” n'ihi ngọzi na ịdị ebube nke Chineke ga-enye ya. N'ọnọdụ ndị ọzọ, emere Moses ka ọ bụrụ Chineke nye Fero, a kpọkwara ndị ikpe n'ime Ọpụpụ dịka Chineke (Elohim). Nkwupụta sitere na English Standard Version (ESV) belụsọ na egosighi n'ụzọ ọzọ.
Jọn 10: 34-37, Jizọs kwuru maka ndị akpọrọ okwu Chineke chi
34 Jizọs zara ha, sị:Ọ bụ na edeghị ya n'iwu gị, 'Asịrị m, unu bụ chi'? 35 Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ha chi onye okwu Chineke bịakwutere ya — Akwụkwọ Nsọ enweghịkwa ike imebi— 36 ùnu na -ekwu maka onye Nna ya doro nsọ zite n'ụwa, 'Ị na -ekwulu Chineke,' n'ihi na m kwuru, 'Abụ m Ọkpara Chineke'? 37 Ọ bụrụ na m adịghị arụ ọrụ Nna m, unu ekwela.
Abụ Ọma 82: 6-7, a kpọrọ ụmụ mmadụ chi
6 Asịrị m,Ị bụ chi, Umu Onye Nke kachasi ihe nile elu, unu nile; 7 otu o sila dị, dị ka mmadụ ka ị ga -anwụ, daa dị ka onye isi ọ bụla. ”
Abụ Ọma 45: 2-7, A kpọrọ Mesaịa ahụ dịka Chineke maka ịbụ onye Chineke tere mmanụ
2 Ị mara mma karịa n'etiti ụmụ mmadụ; A wụsara amara n'egbugbere ọnụ gị; ya mere Chineke agọziwo gị ruo mgbe nile. 3 Kee mma agha gị n'apata ụkwụ gị, gị dike, n'ịma mma na ịdị ebube gị! 4 N'ịdị ebube gị jiri mmeri merie maka eziokwu na ịdị nwayọọ na ezi omume; ka aka nri gị kụziere gị ọrụ dị egwu! 5 Akụ́ gị dị nkọ n'obi ndị iro eze; ndị dị iche iche na -ada n'okpuru gị. 6 Ocheeze gị, Chineke, na -adị ruo mgbe niile ebighị ebi. Mkpanaka alaeze gị bụ mkpanaka nke izi ezi; 7 ị hụrụ ezi omume n'anya ma kpọọ ajọ omume asị. Ya mere, Chineke, bụ́ Chineke gị, etewo gị mmanụ jiri mmanụ ọnessụ gafere ndị ibe gị;
Ọpụpụ 4: 14-16, Moses dị ka Chineke nye Erọn
14 Iwe Jehova we di ọku n'aru Moses, Ọ we si, Ọ̀ nọghi, bú Eron nwa -nne -gi, bú onye Livai? Ama m na o nwere ike ikwu okwu nke ọma. Le, ọ na -apụta izute gị, mgbe ọ ga -ahụ gị, ọ ga -a gladụrị ọ inụ n'obi ya. 15 Ị ga -agwa ya okwu, tinyekwa okwu ndị ahụ n'ọnụ ya, m ga -anọnyere ọnụ gị na ọnụ ya wee kuziere gị ihe ị ga -eme. 16 Ọ ga -agwa gị ndị mmadụ okwu, ọ ga -abụkwa ọnụ gị, gi onwe -gi gābu -kwa -ra ya Chineke.
Ọpụpụ 7: 1, Moses bụ Chineke nye Fero
Na1 Jehova we si Moses, Le, Emewo m gị ka ị dị ka Chineke nye Fero, nwanne gị nwoke Erọn ga -abụkwa onye amụma gị.
Ọpụpụ 21: 6, Ndị ikpe nke Israel ka a kpọrọ Chineke
6 onye -nwe -ya g shallme kwa ka ọ biakute Chineke, ọ ga -eduga ya n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ awara ụzọ. Nna ya ukwu ga -ewere ịpịa ntị gụpụ ntị ya, ọ ga -abụkwa ohu ya ruo mgbe ebighị ebi.
Ọpụpụ 22: 8-9, Ndị ikpe nke Israel ka a kpọrọ Chineke
8 Ọ bụrụ na achọtaghị onye ohi, onye nwe ụlọ ga -abịaru Chineke nso igosi ma ọ tinyela aka ya n'ihe onye agbata obi ya. 9 Maka mmebi ọ bụla nke ntụkwasị obi, ma ọ bụ maka ehi, ịnyịnya ibu, atụrụ, uwe mwụda, ma ọ bụ ụdị ihe ọ bụla furu efu, nke mmadụ na -ekwu maka ya,Nke a bụ ya, 'okwu nke otu abụọ a ga -abịa n'ihu Chineke. Onye Chineke katọrọ ga -akwụ onye agbata obi ya okpukpu abụọ.
Ọpụpụ 22: 28, Ndị ikpe nke Israel ka a kpọrọ Chineke
28 "Ị gaghị akọcha Chineke, abụkwala onye na -achị ndị gị ọnụ.
A na -ewere ihe mmụọ ozi Chineke kwuru ka a ga -asị na ọ sitere na Chineke n'onwe ya. Nke a bụ iwu ụlọ ọrụ ndị Juu. E gosipụtara ozizi a na Tanakh (Agba Ochie) niile. Ọtụtụ ndị na -ejere Chineke ozi na -egosi na ha bụ Chineke mana ọ bụghị n'ụzọ nkịtị. N'ọnọdụ ebe enwere mmadụ abụọ na otu na -ekwuchitere onye ọzọ mana ha dị iche, a na -ewere ya na Talmud, Targums na olu nkọwa ndị Juu, na ọ bụ ihe nnọchianya.
Jenesis 31: 11-13 (Mkpu), mmụọ ozi nke Chineke na-ekwu okwu na mmadụ mbụ dị ka Chineke
11 mgbe ahụ mmụọ ozi Chineke kwuru nye m na nrọ, 'Jekọb,' m wee sị, Lee m! 12 Ọ si, Welie anya -gi abua, hu, nkpi nile ndi n mateso n'ìgwè ewu na aturu di ọcha, tu kwa ntupọ, tu kwa ntu: n'ihi na ahuwom ihe nile Leban na -eme gi. 13 Abụ m Chineke nke Betel, ebe i tere ogidi mmanụ wee kwe m nkwa. Bilie, si n'ala a pụọ, laghachi n'ala ndị ikwu gị. '”
Ọpụpụ 3: 2-6 (Mkpu), Mmụọ ozi Jehova na-ekwu okwu, a na-agwakwa ya dịka Chineke
2 na mọ -ozi nke Jehova we me ka ọ hu ya anya n'ire ọku site n'etiti osisi ntà. O lere anya, ma, le, osisi ntà na -ere ọkụ, ma erepịaghị ya. 3 Moses we si, M'g willwezuga onwem, hu oké ihe -ọhuhu nka, gini mere osisi ntà ahu n isjighi rechapu. 4 Mb thee Jehova huru na o wezugara onwe -ya ihu, Chineke si n'ime ọhịa kpọọ ya oku, "Moses, Moses! ” Ọ si, Lekwam. 5 O wee sị, “Abịala nso; yipụ akpụkpọ ụkwụ gị, n'ihi na ebe ị na -eguzo bụ ala nsọ. ” 6 O wee sị, "Abụ m Chineke nke nna gị, Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb. ” Moses we zobe iru -ya, n'ihi na ọ nātu egwu ilegide Chineke anya.
Mgbe ekwuru na Moses zobere ihu ya n'ihi na ọ na -atụ egwu ilele Chineke, anyị maara na onye a bụ mmụọ ozi Jehova n'ime ọhịa
Ọpụpụ 3: 2 kwuru na ọ bụ mmụọ ozi Jehova
Eluigwe enweghị ike ịnwe Chineke (1 Ndị Eze 8:27)
O nwebeghị onye hụtụrụla Chineke mgbe ọ bụla (1 Jọn 4:12)
Chineke bi n'ìhè a na -apụghị ịbịaru nso (1 Tim 6:16)
Onye Kasị Elu anaghị ebi n'ụlọ ejiri aka rụọ (Ọrụ 7: 48-50)
Chineke na-ekpughe onwe ya site n'aka ndị ozi ya (Hib 1: 1-2)
Deuterọnọmi 5:22 (ESV), Chineke gwara Moses okwu mana ekwuru na ọ gwara nzukọ ahụ niile
22 “Okwu ndị a Jehova si n'etiti ọkụ, igwe ojii na oké ọchịchịrị gwa ọgbakọ unu niile okwu n'ugwu ahụ, na oke olu; ọ tụkwasịghịkwa ihe ọzọ. O wee dee ha n'elu mbadamba nkume abụọ wee nye m ha.
Deuterọnọmi 11: 13-15 (LSV), Moses na-ekwu okwu na onye mbụ dị ka Chineke
13 “Ọ bụrụkwa na ọ bụrụ na i gee ntị nke ọma n'ihe m nyere n'iwu nke m na -enye gị n'iwu taa, ịhụ Chineke gị bụ YHWH n'anya, na iji obi gị niile na mkpụrụ obi gị niile na -efe Ya, 14 mgbe ahụ I enyewo mmiri ozuzo nke ala gị na oge ya - mmiri ozuzo mgbụsị akwụkwọ na mmiri mmiri ozuzo - ị chịkọtakwara ọka gị, na mmanya ọhụrụ gị, na mmanụ gị; 15 na I enyewo m ahịhịa ndụ n'ime ubi gị maka anụ ụlọ gị, i rie wee rijuo afọ.
Ndị Ikpe 6: 11-14 (ESV), a na-akpọ mmụọ ozi Jehova Jehova ka ọ na-ekwuchitere Jehova
11 Ugbu a mmụọ ozi Jehova wee bịa nọdụ ala n'okpuru osisi terebinth dị n'Ọfra, nke Joash onye Abiezrite bụ, ebe nwa ya nwoke Gideọn na -akụ ọka wit n'ebe nzọcha mmanya iji zobe ya ndị Midian. 12 Mọ -ozi nke Jehova we me ka ọ hu ya anya, si ya, Jehova nọyere gi, Dike nke dimkpa. ” 13 Gideon we si ya, "Biko, onyenwe m, ọ bụrụ na Jehova nọnyeere anyị, gịnị kpatara ihe a niile jiri mee anyị?? Wherele ebe kwa ka ọlu -ebube nile nke nna -ayi -hà kọrọ ayi, si, Ọ bughi Jehova mere ka ayi si n'Ijipt rigota? Ma ugbu a, Jehova agbahapụwo anyị wee nyefee anyị n'aka Midian. ” 14 Jehova we chigharikute Ya, si, “Gaa n'ike a zọpụta Izrel n'aka Midian; ọ bụ m na -eziteghị gị? ”
Zekaraịa 3: 6-7 (ESV), Akụkụ nke Jehova na-ezi ozi Jehova
na mmụọ ozi Jehova na -emesi Jọshụa obi ike, 7 "Otú a ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: Ọ bụrụ na ị ga -eje ije n'ụzọ m wee debe iwu m, mgbe ahụ ị ga -achị ụlọ m ma lekọta ụlọ ikpe m, m ga -enye gị ikike ịbanye n'etiti ndị guzo ebe a.
Zekaraya 4: 6 “Ma site na Mmụọ m, ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru.
6 O wee sị m, “Nke a bụ okwu Jehova gwara Zerọbabel: Ọ bụghị n'ike, ọ bụghịkwa n'ike, kama site na Mmụọ m, ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru.
Hagaị 1: 13 (HV), Hagaị, onye amụma bụ mmụọ ozi nke Jehova, onye na -ekwu okwu na mmadụ mbụ dị ka Chineke
13 Mgbe ahụ Hagaị, onye ozi nke Jehova, wee jiri ozi Jehova gwa ndị ahụ, sị, “M nọnyeere unu, ka Jehova kwuru. "
Mmụọ ozi nke Jehova bụ nsonaazụ dị mkpa nke Chineke na -enweghị ike itinye ya na oge ma ọ bụ ohere. Ọ bụghị obodo, ma ọ bụ ahụ ma ọ bụ ụlọ nsọ. N'ihi nke a, Chineke na -ezipụ ndị ozi ka ha na mmadụ kwurịta okwu. Chineke enweghị ike gbadata n'onwe ya ebe ọ bụ na nke ahụ ga -etinye mmachi n'onwe ya. Ihe mmụọ ozi na -eme bụ ime uche Chineke. Okwu Hibru malach n'ụzọ nkịtị pụtara onye ozi. Ọzọkwa, Chineke na -eji ndị ozi ekwuchitere ya. Ndị ozi na -ekwukarị okwu na mmadụ mbụ dị ka a ga -asị na ha bụ Chineke onye ozi si na ya pụta.
(1 Ndị Eze 8:27) Eluigwe enweghị ike ịnwe Chineke
27 “Ma Chineke ọ ga -ebi n'elu ụwa n'ezie? Le, elu -igwe na elu kachasị elu agaghị enwe ike ịnabata gị; ma -ọbu ulo a nke m'wuworo!
Hagaị 1:13 (LSV), onye amụma Hagaị bụ onye ozi nke YHWH (mmụọ ozi nke Jehova)
Na Hagaị, onye ozi nke YHWH, n'ozi nke YHWH, na -agwa ndị mmadụ okwu, na -asị, "Anọnyeere m unu, nkwupụta nke Yahweh."
Malakaị 2: 7 (ESV), a na -akpọkwa ndị nchụàjà malach (ndị ozi) nke Jehova
7 N'ihi na egbugbere ọnụ onye nchụàjà kwesịrị ichekwa ihe ọmụma, ndị mmadụ kwesịrị ịchọ ndụmọdụ n'ọnụ ya, n'ihi na ọ dị onye ozi nke Jehova nke ụsụụ ndị agha.
Nkọwa ndị dị n'elu na -egosi etu ndị ọrụ Chineke na -abụghị Chineke n'ụzọ nkịtị. Ọ nweghị ebe n'ime Akwụkwọ Nsọ enyere ndị mmadụ iwu ka ha fee mmụọ ozi nke Onyenwe anyị. Eziokwu ahụ bụ na mmụọ ozi nke Jehova abụghị n'ụzọ nkịtị YHWH (YHWH) na -egosipụtakwa ọzọ site na eziokwu ahụ bụ na a na -enye mmụọ ozi nke Jehova (YHWH) ntụziaka site n'aka Jehova (YHWH) ma na -akasi ya obi site na Jehova (YHWH).
(2 Samuel 24: 16-17) Chineke gwara mmụọ ozi Jehova ka o chegharịa
16 Mọ -ozi we setipu aka -ya n'ebe Jerusalem di ibibi ya, Jehova we chègharia n'ihe ọjọ ahu we si mọ -ozi ahu nke n destructionbibi n'etiti ndi Israel, O zuwo; ugbu a, jide aka gị. ” Mọ -ozi nke Jehova nọ kwa n'ebe -nzọcha -ọka nke Arọna onye Jebus. 17 Devid we gwa Jehova okwu, mb hee ọ huru mọ -ozi ahu nke n stritib peopleu ndi Israel, ọ si, Le, emehiewom, mu onwem emewo kwa ihe ọjọ. Ma aturu a, gini ka ha mere? Mbọk, yak ubọk fo odu ye ami ye ufọk ete mi. ”
Zekaraya 1: 12-13 (NIV), Chineke kwuru okwu iji kasie mmụọ ozi Jehova obi
12 Mọ -ozi nke Jehova we si, Jehova nke usu nile nke ndi -agha, rùe ole mb youe ka I nāgaghi -emere Jerusalem na obodo Juda ebere, bú nke I wesaworo iwe megide ọgu arọ atọ na iri a? 13 Jehova we za mọ -ozi nke nāgwam okwu okwu amara na nkasi obi.
N'ime Agba Ọhụrụ, Jizọs na -akọwa onwe ya dịka ndị ọzọ kọwara ya dị ka onye nnọchi anya Chineke. Amaokwu Bible sitere na ESV.
John 7: 16-18, "Ozizi m abụghị nke m, kama ọ bụ nke onye zitere m"
John 8: 26-29, "Adịghị m eme ihe ọ bụla n'onwe m, kama na-ekwu dị ka Nna m ziri m"
John 12: 49-50, "Nna nke zitere m enyela m iwu-ihe m ga-ekwu na ihe m ga-ekwu"
Ọrụ 3: 19-26, Chineke mere ka ohu ya bilie
19 Ya mere chegharia, chigharia, ka ewe b͕apu nmehie-unu, 20 oge nke ume ume nwere ike si n'iru Onyenwe anyị, nakwa na o nwere ike izipu Kraist ahọpụta maka gị, Jizọs, 21 bụ onye eluigwe ga-enwerịrị ruo mgbe ọ ga-eweghachite ihe niile Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ma ọ ga -abụ na mkpụrụ -obi ọbụla nke na -adịghị ege ntị onye amụma ahụ a ga -ebibi ya n'etiti ndị mmadụ. ' 24 Ndi-amuma nile ndi nēkwu okwu, site na Samuel na ndi soro ya, kwusara ubọchi ndia. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ niile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo Ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya, ka ọ gọzie gị site n'ịchụpụ onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
Ọrụ 4: 24-30, ekpere ndị kwere ekwe na-ekwu maka “ohu gị dị nsọ Jizọs”
E nwere ebe ole na ole n'ime Agba Ọhụrụ ebe Jizọs, onye nnọchi anya Chineke, na Chineke nke ọ na -ejere ozi jikọtara site n'ịkpọ ya Chineke. Iwu ụlọ ọrụ nwere ike ịkọwa ihe ndị a.
John 1: 17-18 (ESV), onye naanị ya bụ Chineke, onye nọ n'akụkụ Nna, o meela ka a mara ya
17 N'ihi na esitere n'aka Moses nye iwu Chineke; amara na ezi -okwu sitere n'aka Jisus Kraịst bịa. 18 Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb ;e ọ bula; nanị Chineke ahụ, onye nọ n'akụkụ Nna, onye ahụ emewo ka a mara ya.
* Ederede a nwere ọgụgụ dị iche iche gbasara “onye naanị ya bụ Chineke”
“Ọkpara amụrụ naanị” (ASV, DRA, HCS, JNT, KJV, NAB, NJB, NKJ, NRS, REV, RSV, TEV, TLB)
“Onye amụrụ naanị” - obere ihe dị iche
John 10: 29-37 (ESV), "Mụ na Nna bụ otu."
29 Nna m, onye nyere m ha, dị ukwuu karịa ihe niile, ọ dịghịkwa onye pụrụ ịnapụ ha n'aka Nna m. 30 Mu na Nna bu otu. " 31 Ndị Juu tụtụkwara nkume ọzọ ịtụ ya. 32 Jizọs zara ha, sị:Egosiri m gị ọtụtụ ọrụ ọma si n'aka Nna m; kedu onye n'ime ha ka ị ga -atụ m nkume? ” 33 Ndị Juu zara ya, "Ọ bụghị maka ezi ọrụ ka anyị na -aga ịtụ gị nkume kama maka nkwulu, n'ihi na gị onwe gị bụ mmadụ, mee onwe gị Chineke." 34 Jizọs zara ha, sị:Ọ bụ na edeghị ya n'iwu gị, 'Asịrị m, unu bụ chi'? 35 Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ha chi onye okwu Chineke bịakwutere ya — Akwụkwọ Nsọ enweghịkwa ike imebi ya- 36 ùnu na -ekwu maka onye Nna ya doro nsọ zite n'ụwa, 'Ị na -ekwulu Chineke,' n'ihi na m kwuru, 'Abụ m Ọkpara Chineke''? 37 Ọ bụrụ na anaghị m arụ ọrụ Nna m, ekwela na m;
(John 14: 8-11, 15-20) "Onye hụrụ m ahụla Nna m
8 Filip sịrị ya, “Onyenwe anyị, gosi anyị Nna ahụ, o zukwara anyị.” 9 Jizọs sịrị ya, “Mụ na gị anọwo ogologo oge a, ma ị mabeghị m, Filip? Onye hụrụ m ahụla Nna m. Olee otu ị ga -esi kwuo, 'Gosi anyị Nna ahụ'? 10 You kweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem? Okwu m na -agwa gị anaghị m ekwu n'onwe m, kama Nna nke bi n'ime m na -arụ ọrụ ya. 11 Kwere m na m nọ na Nna na Nna nọkwa n'ime m, ma ọ bụghị, kwere n'ihi ọrụ ndị ahụ n'onwe ha ...
15 “Ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu ga -edebe iwu m. 16 na Aga m arịọ Nna, ọ ga -enyekwa unu ihe inyeaka ọzọ, ka m nọnyere gị ruo mgbe ebighi ebi, 17 ọbuná Mọ nke ezi -okwu, onye ụwa apụghị ịnabata, n'ihi na ọ hụghị ya, ọ maghịkwa ya. Ị maara ya, n'ihi na ọ na -ebi n'ime gị, ọ ga -anọkwa n'ime gị. 18 “Agaghị m ahapụ gị dị ka ụmụ mgbei; A ga m abiakwute gi. 19 Ọ fọdụrụ nwa mgbe, ụwa agaghịkwa ahụ m ọzọ, ma unu ga -ahụ m. N'ihi na m dị ndụ, gị onwe gị ga -adịkwa ndụ. 20 N'ubọchi ahu unu gāmara na Mu onwem nọ nime Nnam, na unu onwe -unu nọ nimem, na Mu onwem di kwa nime unu.
John 20: 26-31 (NIV), “Onyenwe m na Chineke m!
Ụbọchị asatọ ka e mesịrị, ndị na -eso ụzọ ya nọ n'ime ọzọ, Tọmọs sokwa ha. Ọ bụ ezie na emechiri ụzọ, Jizọs bịara guzoro n'etiti ha wee sị, "Udo dịrị gị." 27 Mgbe ahụ ọ sịrị Tọmọs, “Tinye mkpịsị aka gị ebe a, hụ aka m abụọ; setipu aka -gi, tukwasi ya n'akukum. Ekwela, kama kwere. ” 28 Thomas zara ya sị,Onyenwe m na Chukwu m! " 29 Jisus si ya, Ì kwere n'ihi na I huwom? Ngọzi na -adịrị ndị na -ahụghị ma kwere. ” 30 Ma Jisus mere ọtutu ihe -iriba -ama ọzọ n'iru ndi n disciplesso uzọ -Ya, nke an notdeghi n'akwukwọ a; 31 ma ihe ndị a ka e dere ka unu wee kwere nke ahụ Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, na site na ikwere, ị ga -enwe ndụ n'aha ya.
1 John 5: 18-20 (ESV), Ọ bụ ezi Chineke na ndụ ebighi ebi
Anyị maara na onye ọ bụla a mụrụ site na Chineke anaghị anọgide na -eme mmehie, mana onye mụrụ ya na -echebe ya, ajọ onye ahụ adịghịkwa emetụ ya aka.
19 Anyị maara na anyị sitere na Chineke, ụwa dum dịkwa n'aka ajọ onye ahụ.
20 Anyị makwa nke ahụ Ọkpara Chineke abịawo nye anyị nghọta, ka anyị wee mara onye bụ onye eziokwu; na anyị nọ n'ime ya bụ onye ezi -okwu, n'ime Ọkpara ya Jizọs Kraịst. Enye edi ata Abasi ye nsinsi uwem.
Nsụgharị dị iche iche na -akọwa nke a n'ụzọ dị iche:
"Nke a bụ ezi Chineke na ndụ ebighi ebi." (ASV, KJV, NKJV, NASB, NASB1995, 1977, WEB)
“N'ihi Jizọs, anyị bụzi ezi Chineke nke na -enye ndụ ebighi ebi. (CEV)
Ajụjụ a na -arụrịta ụka nke ukwuu gbasara ahịrịokwu a bụ onye bụ “Onye a” onye bụ ezi Chineke? Ọ bụ Nna ahụ ka ọ bụ Jizọs Kraịst? Ụtọasụsụ nwere ike ịga n'ụzọ ọ bụla, akụkụ ọ bụla nke arụmụka ahụ enwela ndị nkwado pụrụ iche, yabụ ịkpọkọta ndị ọkà mmụta iji kwado ọnọdụ mmadụ nwere ike ime maka ọnọdụ abụọ a. Akwụsịghị arụmụka ahụ site na aha mbụ kacha nso n'ihi na ntụnye aka na aha kacha nso abụghị iwu siri ike nke ụtọasụsụ Grik na enwere oge Jọn, dị ka ndị ọzọ dere Agba Ọhụrụ, anaghị eso ya (cp. 1 Jọn 2:22).
Ọlụ Ndị Ozi 20:28 (ESV), nzukọ Chineke, nke o ji ọbara nke ya nweta
28 Lezienu onwe -unu na ìgwè aturu anya nke ọma, nke Mmụọ Nsọ mere unu ka unu bụrụ ndị nlekọta ilekọta ụka nke Chineke, nke o jiri ọbara nke ya nweta (ọbara nke ya).
* Ọtụtụ nsụgharị, gụnyere ESV, tụgharịrị Ọrụ 20:28.
Ihe odide mbụ nke Alexandria na Critical Greek Text (NA-28) gụrụ, “Ụka nke Chineke, nke o jiri ọbara nke ya zụta.”
Mgbe e mesịrị, ihe odide Byzantine gụrụ, "Ụka nke Onyenwe anyị na Chineke, nke o ji ọbara nke ya zụta."
Ọtụtụ nsụgharị Bekee na -agụ n'ụzọ na -ezighi ezi "Ụka nke Chineke, nke o jiri ọbara nke ya zụta"
Ndị Rom 9: 4-5 (ESV), "ọ bụ Kraịst ahụ bụ Chineke nke ihe niile (ọtụtụ mgbanwe)"
4 Ha bụ ndị Israel, bụrụkwa nke ha bụ nkuchi, ebube, ọgbụgba ndụ, inye iwu, ofufe na nkwa. 5 Ọ bụ ha nwe ndị nna ochie, na agbụrụ ha, dị ka anụ ahụ si dị, bụ Kraịst, onye bụ Chineke nke ihe niile, gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. Amen.
* Ederede a nwere ọtụtụ ọgụgụ (mgbanwe) dị iche iche gbasara "Kraịst, onye bụ Chineke nke ihe niile, onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi."
“Kraịst. Ka Chineke onye kachasị ihe niile bụrụ onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi ”(NAB, REB, RSV, TEV)
“Kraist, onye bụ isi ihe niile, ka Chineke gọziri ruo mgbe ebighị ebi” (ASV, DRA, KJV, NAS, NAU, NRS)
“Kraịst, onye bụ onye isi ihe niile. Chineke gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi ”(JNT, TLB)
Taịtọs 2: 11-14 (NIV), Chineke anyị dị ukwuu na onye nzọpụta anyị Jizọs Kraịst
11 N'ihi na amara Chineke apụtala, na -eweta nzọpụta nye mmadụ niile, 12 na-akụziri anyị ịjụ asọpụrụghị Chineke na agụụ ihe ọjọọ nke ụwa, na ibi ndụ njide onwe onye, ​​izi ezi na nsọpụrụ Chineke n'oge a, 13 na -echere olile anya anyị a gọziri agọzi, mpụta nke ebube nke Chineke anyị dị ukwuu na Onye Nzọpụta Jizọs Kraịst, 14 Onye nyere onwe ya maka anyị ịgbapụta anyị n'ajọ omume niile na iji mee onwe ya ka ọ dị ọcha maka ndị nke ya bụ ndị na -anụ ọkụ n'obi maka ezi ọrụ.
2 Pita 1: 1-2 (NIV), Chineke anyị na Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst
1 Simeon Pita, odibo na onye -ozi nke Jisọs Kraịst, na -edetara ndị ahụ nwetaworo okwukwe nke ịha nhata nha anya anyị site n'ezi omume nke Chineke anyị na Onye Nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst: 2 Ka amara na udo dịrị gị n'ọmụma Chineke na nke Jisọs Onyenwe anyị.
Ndị Hibru 1: 8-9 (ESV), ocheeze gị, Chineke, na-adị ruo mgbe niile ebighị ebi
8 Ma ọ na -ekwu banyere Ọkpara ahụ, "Ocheeze gị, Chineke, na -adị ruo mgbe niile ebighị ebi, mkpanaka nke izi ezi bụ mkpanaka alaeze gị. 9 Afo amama edinen ido onyụn̄ asua idiọkido; ya mere Chineke, bụ́ Chineke gị, etewo gị mmanụ jiri mmanụ ọnessụ gafere ndị ibe gị. "
Amaokwu ndị a, ruo na ha ziri ezi n'ihe odide Agba Ọhụrụ, na -egosi na enwere ike ịkpọ Jizọs "Chukwu" dabere n'echiche nke inye mmadụ ọrụ.
Agbanyeghị na Jizọs bụ ohu Chineke nke enwere ike were dị ka Chineke dabere n'echiche nke Agencylọ Ọrụ, o doro anya site na onye akaebe na -eso ya na ọ bụghị Chineke n'echiche nke onlogical nkịtị. Amaokwu Akwụkwọ Nsọ dị na ESV.
Ndị Hibru 4: 15-5: 1, Onye isi nchụàjà ọ bụla a họpụtara ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke
15 n'ihi na anyị enweghị nnukwu onye nchụàjà nke na -enweghị ike imetara anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwalere n'ihe niile dịka anyị onwe anyị, ma o nweghị mmehie.. 16 Ka anyị were nkwuwa okwu bịaruo ocheeze amara nso, ka anyị wee nweta ebere wee chọta amara inye aka n'oge mkpa. 5: 1 N'ihi na onye isi nchụàjà ọ bụla a họpụtara n'etiti mmadụ ka a họpụtara ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke, ịchụ àjà na àjà maka mmehie.
Echiche ndị Juu banyere inye ikike bụ na a na -ahụta onye nnọchi anya onye ahụ dị ka onye ahụ n'onwe ya. Chineke na -eji ndị nnọchianya bụ ndị nnọchite anya na ndị ozi na -ekwupụta okwu na ebumnuche Chineke. Jizọs, onye Chineke tere mmanụ, dabara n'ụzọ ihe atụ nke onye nnọchi anya ya. Ya onwe ya bụ Mesaịa ahụ nke ndị amụma niile na -agbara ama bụ onye bụ isi ohu Chineke nke a ga -esite na ya gọzie mba niile nke ụwa. N'ime ndị Hibru a na -akpọ Jizọs dịka ma onyeozi anyị na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị. Usoro ndị a na nke onye ozi (Malach) na onye nnọchi anya (Shaliach). Ntughari dị na ESV belụsọ na ekwuputaghị n'ụzọ ọzọ.
Deuterọnọmi 6: 4-5, Onyenwe anyị Chineke anyị bụ Onyenwe anyị bụ otu.
Deuterọnọmi 4:35, E wezụga YHWH, ọ dịghị Chineke ọzọ dị
35 E gosiri gị ya, ka i wee mara na Jehova bụ Chineke; ọ dighi onye ọzọ ma -ọbughi ya.
Deuterọnọmi 18: 15-19, Moses na-ekwupụta na YHWH, bụ Chineke gị, ga-esi n'etiti gị kpọlite ​​onye amụma dịka m
15 "Jehova bụ́ Chineke gị ga -esi n’etiti gị, n’etiti ụmụnne gị, kpọlitere gị onye amụma nke dị ka m- ọ bụ ya ka ị ga -ege ntị— 16 dika unu riọrọ n'aka Jehova, bú Chineke -unu, na Horeb n'ubọchi nkpọkọta ahu, mb saide unu siri, Ka m'ghara inu kwa olu Jehova, bú Chinekem, ọzọ, ka m'ghara ihu ọku uku a ọzọ, ka m'we ghara inwu. 17 Jehova wee sị m, 'Ihe ha kwuru bụ eziokwu. 18 M ga -esi n'etiti ụmụnne ha họpụtara ha onye amụma dị ka gị. M'g puttiye kwa okwum nile n'ọnu -ya, ọ gāgwa kwa ha okwu nile nke M'g commandnye ya n'iwu. 19 Na onye ọ bụla nke na -agaghị anụ okwu m nke ọ ga -ekwu n'aha m, Mụ onwe m ga -achọ ya n'aka ya.
Ọrụ 3: 19-26, dịka Moses na ndị amụma kwupụtara, Chineke mere ka ohu ya bilie
19 Ya mere chegharia, chigharia, ka ewe b͕apu nmehie-unu, 20 ka oge inye ume wee si n'ihu Onye -nwe bịa, na nke ahụ o nwere ike iziga Kraịst ahụ a họpụtara nye gị, Jizọs, 21 bụ onye eluigwe ga-enwerịrị ruo mgbe ọ ga-eweghachite ihe niile Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ma ọ ga -abụ na mkpụrụ -obi ọbụla nke na -adịghị ege ntị onye amụma ahụ a ga -ebibi ya n'etiti ndị mmadụ. ' 24 Ndi-amuma nile ndi nēkwu okwu, site na Samuel na ndi soro ya, kwusara ubọchi ndia. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ niile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo Ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya, ka ọ gọzie gị site n'ịchụpụ onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
Ndị Hibru 3: 1-2, Jizọs onye ozi (shaliach) na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị
Ya mere, ụmụnna nsọ, unu ndị na -ekere oke ọkpụkpọ eluigwe, tụgharịa uche Jizọs, onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị, 2 onye kwesịrị ntụkwasị obi nye onye họpụtara ya, dika Moses kwesiri ntukwasi -obi n'ulo Chineke nile.
Malakaị 2: 7, A na -akpọ ndị nchụàjà malach (ndị ozi) nke Jehova
Jizọs bụ Mesaya ahụ bụ́ mmadụ. Ma dịka onye nnọchi anya Chineke, a na -akpọ ya Chineke ebe ụfọdụ. Agbanyeghị, nke a kwekọrọ n'iwu nke ụlọ ọrụ, na nke a apụtaghị na Jizọs bụ Chineke n'echiche nke ọnụnọ nkịtị. Ọ bụ ezie na o kwuru okwu nke Nna wee mee dịka Nna nyere ya n'iwu, ya na Nna bụ ndị pụrụ iche, kama ọ bụ ohu Chineke nke Chineke mere ka ọ bụrụ Mesaya ya. Jizọs, onye ozi (Shaliach) na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị, kwesịrị ntụkwasị obi nye onye họpụtara ya, dịka Mozis kwesịkwara ntụkwasị obi n'ụlọ Chineke niile. Ntụaka ndị enyere n'okpuru na -egosi nke a ọzọ.
Ndị Hibru 1: 1-4 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Chineke agwawo anyị okwu site n'aka Ọkpara ya, onye ọ họpụtara onye nketa nke ihe niile
1 Ogologo oge gara aga, n'ọtụtụ oge na n'ọtụtụ ụzọ, Chineke si n'ọnụ ndị amụma gwa nna nna anyị hà okwu, 2 ma n’ụbọchị ikpeazụ ndị a ọ gwawo anyị okwu site n'aka Ọkpara ya, onye ọ họpụtara ka ọ bụrụ onye nketa nke ihe niile, Onye ọ bụkwa site n'aka ya ka O kere ụwa. 3 Ọ bụ nchapụta nke ebube Chineke na akara zuru oke nke okike ya, na -ejikwa okwu ike ya na -akwado eluigwe na ụwa. Mgbe ọ sachara onwe ya maka mmehie, ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke ịdị elu nke ịdị elu, 4 ebe ọ karịrị ndị mmụọ ozi karịa aha o ketara dị mma karịa nke ha.
Ndị Hibru 3: 1-2 (ESV), Jizọs onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị
The IVP Bible Background Commentary Agba Ọhụrụ, Craig S. Keener na Jọn 5:30.
“Ya mere, Jizọs bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi shaliach, ma ọ bụ gị n'ụlọnga; Iwu ndị Juu kuziri na onye nnọchianya nwoke ahụ dị ka nwoke n'onwe ya (nke ikike zuru oke kwadoro ya), ruo n'ókè onye nnọchianya ahụ ji nnọchite anya ya nọchite anya ya. Mgbe ụfọdụ, a na -ele Moses na ndị amụma Agba Ochie anya dị ka ndị nnọchi anya Chineke. ”
Nkọwa okwu nke Agba Ọhụrụ na Ọganihu ya, ebe. Martin, Davids, “Iso Christianityzọ Kraịst na okpukpe ndị Juu: akụkụ nke ụzọ”, 3.2. Johannine Christology.
“Ọ dị ka ejiri usoro echiche nke ndị Juu wee mepụta echiche nke Johannine na echiche metụtara ya shaliach (lit. “onye ezitere” site n'eluigwe; shaliach n'asụsụ Hibru, Ndịozi n’asụsụ Grik). Shaliach na echiche ndị amamihe dị mfe Ndị Kraịst narị afọ mbụ na-agbalị ịkọwa onwe ha na ndị ọzọ onye Jizọs bụ na ụdị mmekọrịta ya na Chineke. N'Oziọma nke anọ, ewepụtara Jizọs dịka Okwu nke ghọrọ anụ ahụ (Jn 1: 1, 14). Ọrụ Johannine “Okwu” (akara ngosi) na -eru nso nke Amamihe, nke a na -akọwa mgbe ụfọdụ na ọdịnala Akwụkwọ Nsọ na nke Akwụkwọ Nsọ (Ilu 8: 1–9: 6; Sir 24: 1–34; onye kwesịrị ịma na na Sir 24: 3, amata amamihe dị ka okwu si n'ọnụ Chineke pụta).
N'ime amaokwu atọ, e boro Jizọs ebubo nkwulu maka ịzọrọ ihe ùgwù na ikike dịịrị Chineke. Na akụkụ mbụ, Jizọs chere na ọ na -emebi ụbọchị izu ike site n'ịgwọ otu nwoke wee mezie esemokwu na -esote site n'ịkpọ Chineke Nna ya (Jn 5: 16–18). Ndị nkatọ Jisọs na -aghọta nke a site n'ịzọrọ na Jisọs emewo onwe ya 'onye ya na Chineke hà.' Akụkụ nke abụọ yiri nke ahụ. N'ime ya, Jizọs kwadoro, "Mụ onwe m na Nna m bụ otu." (Jọn 10:30) Ndị na -akatọ ya na -ewere nkume tụgbuo ya, n'ihi na, n'agbanyeghị na ọ bụ naanị mmadụ, Jizọs mere onwe ya Chineke. Mana ihe ọ pụtara ebe a nwere ike ọ bụghị na Jizọs ekwuola n'ụzọ nkịtị na ya bụ Chineke. Nzọrọ ịbụ otu na Chineke nwere ike metụtara echiche shaliach. Dị ka onye nnọchi anya Chineke, onye e zigara ịrụ ọrụ Chineke, Jizọs nwere ike ikwu na ya bụ “otu” ya na Nna ya.
Ndị nnọchiteanya nke Chukwu: Na -ekwu ma na -eme ihe n'Ọkwa Chineke
Jizọs - Onye Nnọchiteanya Kasị Ukwuu nke Chineke
J. Dan Gill, Ndozigharị narị afọ nke 21
Jizọs, onye nnọchi anya Chineke
Pọdkastị Restitudio 163
Enwere Chi abụọ ma ọ bụ ihe ọzọ na -eme? Azịza ya bụ ụkpụrụ nke nnọchiteanya. A pụrụ ịkpọ Jizọs Chineke n'ihi na ọ na -anọchite anya Chineke.